Intombazane kufanele ibe kuhle. Ngakho-ke, zonke izintombi zibuka ukubukeka kwayo. Yonke imininingwane ibalulekile: izingubo, izinwele, ukwakheka ngisho nokuhlunga umzimba. Phela, abaningi banaka izandla zowesifazane naseminwebeni yakhe. Yingakho izipikili kufanele zihlale ziphelile.
Uma kungekho isikhathi sokwenza umuthi, okungenani, udinga ukunikeza izipikili isimo esifanele futhi uphezulu nge-varnish engenambala. Kodwa uma uvass inesikhathi, kungani ungenzi manicure original? Ukuguqulwa komuntu kusiza ukugcizelela ubuntu bakho futhi unikezele ngokugqamile okuyisithombe sakho. Njalo ngonyaka imikhuba emisha yezimfashini ivela ezinkampanini ze-manicure kanye nezimonyo zizama ukufanisa izinto ezintsha, ngakho-ke kaningi kakhulu emashalofini ongawathola ama-nail polishes angavamile.
Yiqiniso, uma usebenza ehhovisi noma ebhange, akunakwenzeka ukuthi umuthi ophukile noma ovuthayo uzoba kufanelekile. Kodwa uma uya eholidini noma eqenjini, khona-ke ukukhwabanisa okunjalo kuzoba okufanayo. Yiqiniso, ungenza izipikili zakho nje njenge-varnish ekhanyayo. Kodwa ngezinye izikhathi ufuna into engavamile. Kodwa ngokuvamile kaningi ukuze wenze umuthi ongavamile, kufanele uhambe ku-salon noma uchithe isikhathi esiningi kuwo. Kodwa-ke, namhlanje ngosizo lwe-varnishes ekhethekile nemiphumela ehlukene, ungakwazi ngemizuzu embalwa uguqule ama-marigolds wakho emsebenzini wobuciko.
Ukugcoba ngekhono lombukiso
I-mirror manicure iphelele eqenjini, iqembu noma iholide. Ubheka ubuhle kakhulu. Ngesikhathi sokuqala umuthi onjalo waqala ukusebenzisa izidumi ezihlukahlukene: Rihanna, Beyonce, Megan Fox, Lady Gaga nabanye. Kodwa okwesikhashana wayinqobe izinhliziyo zamantombazane amaningi, futhi okokuqala kuwona wonke ama-fashionistas. Kunezinto eziningi ze-mirror manicure, kodwa ethandwa kakhulu kubhekwe njengegolide nesiliva.
Yenza ukufanisa okufanayo ekhaya akulula kakhulu. Kukhona amanye amaqhinga asetshenziselwa ubuhle obuhle. Kodwa-ke, kunezindlela eziningi ezakhiwe, indlela yokwenza umuthi onjalo wedwa. Ezitolo, i-varnishes ekhethekile idayiswa, evumela ukuthi umphumela onjalo uzuze. Zinezinto ezinzima, ezingavamile ngathi, ngakho-ke kudingeka uzenzele kancane ngohlelo lokusebenza. Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi lezi zingubo zinzima ukuthola ezitolo ezijwayelekile. Ngakho-ke, uma ufuna ukuyithenga, kufanele ubheke esitolo se-intanethi.
Uma ungenaso isifiso sokubheka i-varnish enjalo, khona-ke ungasebenzisa enye indlela. Thenga isilawuli esikhethekile ngomphumela wesibuko. Ama-shades amaningi athengiswa, ngakho-ke khetha umsebenzi oqondile. Ngaphambi kokuqala komzimba, ulethe ama-marigolds akho ngendlela efanele, kufanele abukeke ephelele: susa amakhemikhali, unciphise umumo, njalonjalo. Qinisekisa ukuthi unciphisa ubuso be-nail. Emva kwalokhu, amafilimu akhethekile afana ne-nails adingeka ukushiswa ngomisi oboya izinwele futhi ahlanganiswe nesilenge. Ukusebenzisa ifayela le-nail, qeda imiphetho yefilimu bese ususa okungaphezulu. Ngosizo lweminye imibala ungenza umdwebo.
I-Vsalone isebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile. Izipikili zemvelo zakha amapuleti ensimbi amancane kakhulu. I-manicure enjalo izohlala isikhathi eside kakhulu, futhi iphephile ngokuphelele epulatifini le-nail.
Njengoba kucatshangwe ngenhla, ungathenga kuphela i-nail polish elula ngomphumela wesibuko. Abakhiqizi abaningi bakhiqiza manje: i-Dior, i-Maybelin, i-Laila, i-Miroff effekti nabanye.
Uma uyintombazane esebenzayo, egcwele ithemba nethemba, njengeklabhu nemisebenzi enomsindo, khona-ke umuthi owenziwe kanjalo uzowuthanda. Ukuvutha komzimba okuvuthayo kuvame ukuqhutshwa ngaphambi kokuya eklabhu. Ukuze wenze lokhu, akudingeki wenze umzamo omkhulu - vele uthenge i-lacquer ekhethekile, efaka i-phosphorus.
Namhlanje ungathengisa i-varnishes ekhanyayo ema-shades ahlukene. Imibala enelisekile yakovoobaobazatelno inike isithombe sakho semvelaphi futhi ugcizelele ukuzikhethela kwakho. Ama-varnishes anjalo asetshenziselwa kalula kwi-nail futhi asatshalaliswa ngokulinganayo phezu kwalo. Ngaphezu kwalokho, i-lacquer isuswa kalula ngokusebenzisa i-remover ye-nail evamile yokususa. Okuhle kunakho konke, ngakho-ke i-varnish ibukeka njengenhlaya enesikhumba esiphezulu. Ngakho-ke, qiniseka ukuzitholela ukuhamba ngezinkomba ezimbalwa ezinemibala ehlukene.
Ukwenza umuthi okhanyayo, sebenzisa isilungisi sezinyosi noma ungqimba oluvikelayo lwe-varnish ecacile emzimbeni wesipikili. Lokhu ukuqinisekisa ukuthi i-varnish ayilimazi ipuleti le-nails, ngoba iqukethe i-phosphorus. Ngemuva kwalokho, gubha ibhodlela le-varnish uphinde usebenzise i-varnish ngendlela efanayo nezipikili. Kungcono ukusebenzisa i-varnish emaceleni ambalwa. Ukuze ukhanyise phezulu, sebenzisa ungqimba we-lacquer engenambala. Susa le varnish kungcono izindlela, ezingenayo i-acetone. Ngemva kokususwa kwe-varnish, kungcono ukusebenzisa i-varnish evikelayo ngezipikili, ekubunjweni kwayo okukhona i-vitamin B5.
Ukubala kwe-phosphorus particles lacquer kuvutha ebumnyameni futhi ngaphansi kwe-ultraviolet. Ngakho-ke, ukwenza i-varnish ivutha ubusuku bonke ngezipikili zakho, ukugcoba umzimba kufanele kwenziwe kusengaphambili, isibonelo, ekuseni noma emini. Kumele uqaphele ukuthi i-parnphor varnish ayinamandla, ngakho-ke izipikili ngeke zihlale zingaphezu kwezinsuku ezintathu.
I-Netak isivele ivele emashalofini we-varnish ngezipikili, ezihlanganiswe ne-magnet akhethekile. Ukuvota okunjalo ngokushesha kwakha ukuzwa phakathi kwabesifazane befashini. Eqoqweni lokuqala kwakukhona ama-varnishes e-shades emfashini: isiliva, i-lilac, igolide. Njengoba abakhiqizi kuphela beqaphela ukuthi i-varnishes iyadingeka, ngokushesha ivuselela ububanzi bombala futhi manje kukhona imibala eminingi. Lacquers magnetic for izipikili isetshenziswa kanye varnishes elula. Kodwa-ke, umehluko wabo wukuthi ku-varnish kukhona izinhlayiya zensimbi ezithinta amathoyizi, ngaphansi kwethonya lamagnet akhethekile. Ukuzikhethela okunjalo kuzodingeka ukuthi kunambitheke zonke izintombi. Emva kwakho konke, manje, ukwakha i-nail design eyingqayizivele, akudingeki ukuba uye salon bese uchitha imali eningi. Ungenza konke ngokwakho.
Ukwenza umuthi omangalisayo, sebenzisa isisekelo sokuvikela ezipikili. Emva kwalokhu, sebenzisa ungqimba oluncane lwe-varnish yamagnetic emthunzini oyifunayo. I-varnish kufanele ime imizuzu embalwa. Ngemuva kwalokho, sebenzisa ingubo yesibili ye-varnish, kodwa akudingeki ukuthi iphele. Masinyane udinga ukudala iphethini enhle ngosizo lomlingo okhethekile. I-magnet ngaphezu kwepikili kufanele igcinwe cishe imizuzwana engu-10. Akunconywa ukusebenzisa i-varnish ebusweni be-varnish enjalo. I-lacquer magnetic ngokwayo ihlakaniphile ngokwanele.
Ukuze bamangaze ama-fashionistas, abaklami beza okuningi. Isibonelo, umklamo oqhekekile we-manicure. Namuhla, amantombazane amaningi asevele azame konke ubuhle be-varnish nomphumela wokuphuka. Kuyinto yesimanje futhi imfashini. Ukuze wenze i-manicure ibonakale iyamangalisa ngezipikili, kudingeka ukhethe ama-lacquers amabili ahlukeneyo afanele ngaphansi kwezingubo zokugqoka, ukwakheka noma izinwele. Imibala ye-Classic imhlophe futhi imnyama. Le nhlanganisela ifanelekile kokubili ihhovisi kanye neqembu. Uma ufuna ukwenza i-manicure yeholide, khetha i-varnish yomama we-pearl nesiliva noma igolide.
Yenza umuthi oqhekekile kulula. Okokuqala, lungiselela ama-marigolds akho: ususe ama-cuticles, unciphise ukukhonjwa kwezipikili, unciphise ubuso be-nail. Emva kwalokho, vala izipikili ezine-varnish evikelayo. Sebenzisa i-lacquer yombala wesisekelo. Lindela kuze kube yilapho isomile ngokuphelele. Okulandelayo, sebenzisa i-lacquer ekhethekile evaliwe. I-thinner ungqimba lwama-varnish, ukuqina ngokwengeziwe kuzoba yi-cracks ngemuva kokuthi iphelile. Uma i-varnish ikoma, sebenzisa i-varnish ecacile phezulu.
I-Shellac yezipikili: izinzuzo nezingozi
Indlela yokufunda ukwenza i-pedicure ekhaya
Ukugcoba ngezipikili eziphuthumayo - isithombe sezinto ezihlukile zokuklama
I-manicure ne-pedicure ephelele ngaphandle kokushiya ekhaya
Amaminerali aseBerlin "Izinto ze-Stolichnye"
U-squash othosiwe nama-mushroom
Ukwelashwa ngokwemithi ngokweqile kwe-iron
Ukudla okunomsoco nesifo sezinso
Amaphethini okuvula ama-pancake e-frying, ama-recipes anezithombe
Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zesikhumba esisha: ukupheka kwabantu
Izifo ezithathelwanayo ezinganeni: isisimungumane
Isaladi ngamakhowe nenkukhu
Umbuso wokudla kwezingane